Gabadh yar oo 2 jir ah oo matagaysa dhiig, buluug noqotay oo isbitaal ku dhimatay - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Gabadh yar oo 2 jir ah ayaa matagaysa dhiigga, waxayna isu rogaysaa buluug waxayna ku dhimatay isbitaalka - SANTE PLUS MAG
By TELES RELAY On Feb 17, 2021
Qofna ma tuhmin in dhacdadaas halista ah aan laga warheli karin, ilaa ay sababto geerida gabadha. Maalin kasta Oklahoma ku noqda sheekadan murugada leh wuxuuna gudbiyaa digniinta qoyska dhibbanaha. Khasaare ka soo gaadhay lumitaankan, waxay ugu baaqayaan dhammaan waalidiinta inay taxaddar badan muujiyaan.
Brianna Florer - Xigasho: Educadores Live
Xaaladiisu aad ayey uga sii dartay 24 saacadood gudahood
In kasta oo matag socday dhowr maalmood iyo qandho yar, xaaladda Brianna umay keeneyn qoyskeeda walaac dheeraad ah. Maalin ka hor dhimashadeeda, Vice, ayeeyadeed, waxay sheegaysaa inay si farxad leh ula booday walaalkeed iyo laba gabdhood oo walaalo ah ayna u muuqatay mid caadi ah. Kaliya afar iyo labaatan saacadood ayaa ku filnaan laheyd in xaaladiisa ay kasii darto, ilaa heer uu gaaro saadaashiisa muhiimka ah. Gabadhii yarayd waxay biloowday matag dhiig waxayna isku rogtay buluug dhan. Waalidiinteeda, Brian iyo Stephanie Florer ayaa markaa wacay ambalaas. Waxay ahayd kadib markay arkeen dhakhtar inay ugu dambayn fahmeen sababta dhabta ah ee astaamaheeda oo dhan.
Waxay liqday batari badhan - Source: Subtel
Brianna ayaa liqday batariga badhanka lix maalmood ka hor
Raajo ka dib, kooxda caafimaadka waxay ogaadeen batariga bir yar oo wareegsan oo dhibaatada ku haya gabadha. Kan dambe ayaa liqi lahaa lix maalmood ka hor, iyada oo aanu xubin reerkiisa ka mid ahi ka warqabin. "Waxay qalliin ku sameeyeen 2 saacadood," ayuu yiri awoowgiis, isagoo intaas ku daray inaysan awoodin inay joojiyaan dhiigbaxa. "Waxay u maleynayaan in tuubada ay ku dhacday halbowlaha wadnaha iyada oo loo marayo hungurigiisa," ayuu sii raaciyay.
Brianna, waxay ku dhimatay da'da 2 - Source: Oklahoman
"Hal daqiiqo ayay fiicantahay, daqiiqada xigtana way dhimatay," ayuu yiri Vice, isagoo tilmaamaya inaysan wax fikrad ah ka qabin inay liqday shayga sababay dhimashadeeda. Tan iyo markaas wuxuu ugu yeeray waalidiinta inay taxaddaraan oo wuxuu isku dayay inuu kor u qaado wacyiga khataraha la xiriira noocan batteriga yar. Waxaan rabaa in waxyaabahani ka baxaan guriga. Iyagu waa khatar, ”ayuu ka digay. Digniin la mid ah tan qoyska Conway oo iyadana la kulantay geerida murugada leh ee gabadhooda yar. Ugu yaraan 3 sano jir, Brittney waa dhintay ka dib markii uu liqay batariga badhanka kaasoo sababay gubasho hungurigiisa.
Maxay yihiin khataraha la xiriira laqasida batariga badhanka?
2018, a daabacaadan ee Wasaaradda Caafimaadka ee Faransiiska ayaa ka digtay cunista bateriyada badhanka ah ee carruurta, iyadoo ku nuuxnuuxsatay halistooda, gaar ahaan carruurta ka yar 6 sano jir. Khataraha waxay ku lug yeelan karaan ceejinta, sida shay kasta oo yar, laakiin sidoo kale dhibaatooyin nafta halis geliya oo mararka qaarkood u muuqan kara laba saacadood gudahood qaadashada. Kuwani waxay isu muujin karaan sida gubasho, dhiig bax lama filaan ah, hunguriga hunguriga ama daloolidda marinnada hawada. Tani waxay markaa u baahan tahay waxqabadyo waaweyn, iyadoo ay suurtagal tahay in la sii wado wixii intaas ka dambeeya. Intaa waxaa dheer, wasaaraddu waxay shaaca ka qaaday in xitaa la sii daayay, batariga badhanka uu soo bandhigayo halista isku midka ah ee dhaawaca, sidaas darteed muhiimadda ay leedahay feejignaan. Tallaabooyinka fudud ayaa lagula talinayaa in laga fogaado shilalkaas, marka lagu daro dib-u-habayn wanaagsan oo la qaato haddii ay dhacdo in lagu tuhmo cunno ama ku-soo-gal la xaqiijiyay.
Khataraha halista bateriga badhanka - Source: LCI
Aaway baytariyada badhanka badiyaa laga helaa?
Sida laga soo xigtay Waaxda Caafimaadka, baytariyada badhanka waxaa laga heli karaa alaabta lagu ciyaaro, saacadaha, kontaroolada fog, laambadaha, silsiladaha muhiimka ah, qalimaanta, qalabka gargaarka maqalka, nalalka habeenkii, heerkulbeegyadaMarka la soo koobo, waxyaabo badan oo maalin kasta ah oo aynaan daruuri u fiirsan. Sababtaas awgeed, feejignaanta ayaa muhiim u ah hubinta in laga ilaaliyo inay gaaraan carruurta yaryar, ha duubnaadaan ama yaanay duuduubin. Waxa kale oo lagugula talinayaa inaad ku iibsato alaab leh qaybaha batteriga oo aad loo ilaaliyo si carruurtu aysan u awoodin inay furaan.
Maxaa la sameeyaa haddii ilmuhu nuugo batteriga unugga badhanka?
Haddii ilmahaagu liqo noocyada baytariyada ah ama aad ka shakisan tahay inay liqeen, waa muhiim in si dhakhso leh wax looga qabto maxaa yeelay daqiiqad kasta ayaa la tiriyaa. Tanina waxay khuseysaa nooc kasta oo ka mid ah'' shil gudaha ah oo ilmaha halis gelin kara. Calaamadaha ugu horreeya waxaa ka mid noqon kara:
Dhibaato candhuufta liqida
Laakiin kuwani maaha kuwo nidaamsan oo way awoodaan u horseed waalidiinta inay ka nastaan ​​feejignaantooda haddii ay jirto khatar. Sababtaas awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaadan sugin in calaamaduhu muuqdaan kahor intaadan tallaabada qaadin oo aad raacdo tilmaamaha soo socda:
Isla markiiba wac adeegyada caafimaadka degdegga ah ama xarunta xakamaynta sunta U sharax si cad qofka aad la hadlayso in cunugga laga yaabo inuu liqay batteriga badhanka Ha siinin ilmaha cunno ama cabbitaan Ha isku dayin inaad kiciso matag Soo hel aaladda ay ku jirto ama baakidhka batteriga si dhakhtarku ugu oggolaado inuu ogaado cabirkiisa iyo nooca, taas oo hagaajin doonta maaraynta.
Faransiiska gudaheeda, 6 dhimasho ah oo lala xiriirinayo cunitaanka baytariyada badhanka, oo ay ku jiraan 5 caruur yar yar ah, ayaa la duubi lahaa intii u dhaxeysay 1999 iyo 2018. 51 qof ayaa soo bandhigi lahaa dhibaatooyin daran isla mudadaas sida ay sheegtay wasaarada caafimaadka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.santeplusmag.com/une-fillette-de-2-ans-a-peine-vomit-du-sang-devient-bleue-et-meurt-a-lhopital/
TELES RELAY 40663 posts 1 comments
Angelina Jolie ayaa booqatay qaxootiga reer Siiriya ee ku sugan Lubnaan - Video
Fally ipupa oo marwalba guuleysata - Video